Stropical Storm Franklin waxay noqon kartaa duufaan saacadaha soo socda | Saadaasha Shabakadda
Stropical Storm Franklin waxay noqon kartaa duufaan saacadaha soo socda
Casudi casals | | Duufaanada Kulaylka
Duufaanta kulaylaha Franklin, way sii xoogeysan doontaa markay saacaduhu socdaan. Waxaa la saadaalinayaa inay aad ugu dhowdahay inay noqoto duufaan intaysan ku dhicin xeebta Gobolka Veracruz. Dowladda Mexico ayaa soo saartay duufaan "digniin ah" oo ka socota Dekedda Veracruz illaa Tuxpan.
Duufaantii Talaadadii ka soo gudubtay Jasiiradda Yucatan ayaa xilligan ku jirta biyaha Gacanka Mexico. Waxay ku socotaa xawaare dhan 17km / saacaddii, oo ay wadato dabeylo joogto ah oo gaaraya 85km / saacaddii, laakiin "sii xoojin dheeraad ah" ayaa la filayaa, sida laga soo xigtay CNH.
1 Storm Franklin maanta
2 Franklin saacadaha soo socda
Storm Franklin maanta
Stropical Storm Franklin 7:00 subaxnimo, waqtiga UTC.
Hadda waa hore ee "xoojinta" wajiga. Heerkulka biyaha sare ayaa doorbidi doona Marka loo eego duufaanka si ay ugu sii socoto xooggeeda. Alberto Hernández, iskuduwaha guud ee SNM wuxuu yidhi, "xitaa waxay noqon kartaa duufaan", oo ah heerka 1aad mabda 'ahaan, miisaanka Saffir-Simpson.
Bilowgii hore, ma jiraan wax dhibanayaal ah oo loo barooranayo, dhammaan wixii waxyeelo ah ee ay geysatayna waa la dhimay, ayay mas'uuliyiintu ku warrameen. Quintana Roo, waxaa jiray xoogaa goyn ah isgaarsiinta, laakiin shalay galab ayaa markale lasoo celiyay. Sidoo kale, feejignaantii ugu badnayd waa la hawlgaliyay, iyadoo sugaysa Franklin inay mar labaad ku dhufato dhul weynaha qaab duufaan ah.
Franklin saacadaha soo socda
Sawir sida Franklin la filayo inuu noqdo markuu dhulka soo dego
Sida ka muuqata sawirka, Franklin wuxuu yeelan doonaa xoog badan. Sawirka ayaa matalaya meesha ugu sarreysa ee ay gaari karto, ugu yaraan 24 saacadood hadhow midka hadda jira, sawirkii hore ee la sudhay. Labada sawirba waxaa loo qaaday si loo aqoonsado dabaysha 500 mitir ka sarreysa heerka badda.
Dabaylo ka badan 100km / saacaddii ayaa la filayaa. Maamulka ayaa sidoo kale ka digay roobab mahiigaan ah oo duufaantu ay keeni doonto, isla markaana sababi kara daadad halis ah oo dhimasho keena ogeysiisyo iyo digniino kala duwan ayaa la kordhiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaanada Kulaylka » Stropical Storm Franklin waxay noqon kartaa duufaan saacadaha soo socda
AAN FIKRAD KA SIino IN AAN JOOGAY, INAAN KU JOOGNO MEEL dalxiis oo QUINTANA ROO; LA YIRAAHAY DAWLADDA MAAHUUL EE CHETUMAL Q.ROO, MAALINTA KOOXDA FARANKA OO LOOGU SOO DHAWEEYO, OO WAX KASTA OO LAGU SAMEEYAY ISU QAARIN CAD, OO AAN waxba laga qoomameynin, iyadoo aan loo geysan waxyeello soo gaareysa dalxiisyada dalxiiska iyo dadka ku soo batay.
Jawaab ku bixi METEOROLOGIST MIGUEL BARRIENTOS SANTIAGO
//Bilowgii looma baahna in laga qoomameeyo dhibbanayaasha, iyo dhammaan wixii waxyeelo ah ee ay geysatay mar hore ayaa la dhimay, sida ay masuuliyiintu sheegeen. Quintana Roo, hadday jiraan qaar isgaarsiinta ayaa goysa, laakiin shalay galab ayaa mar kale dib loo soo celiyay.//
Waa waxa kaliya ee laga faallooday, qaarna la jaray. Xitaa ma ogaan kartid. Sidoo kale, wax kale lagama faalloon Quintana Roo, maaddaama boostada loo hibeeyay Franklin.
Ku jawaab Claudi
Kuleylka kuleylka ee Yurub wuxuu ka tagayaa buuraha Alps baraf la’aan
Waa maxay iyo sidee loo sameeyaa qulqulka badda?